Iyunithi ye-2 BHK yale mihla embindini wesixeko saseHyderabad - I-Airbnb
Iyunithi ye-2 BHK yale mihla embindini wesixeko saseHyderabad
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguZahed
Indlu ekwindawo enye, umgama wemizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwisikhululo saseIrrum Manzil Metro, enefenitshala epheleleyo, indlu enamagumbi okulala ayi-2 (enendawo yokuhlamba, indawo yokuhlala nekhitshi) kwindawo ethe cwaka nehlala abantu abaninzi. Le ndawo isandul 'ukulungiswa inendawo yegadi kunye nendawo yokupaka.
Iifenitshala ziquka indawo eyahlulwe phakathi kwamagumbi okulala, umatshini wokuhlamba impahla, ifriji, into yokucoca amanzi, i-microwave, iketile enepleyiti eshushu, i-toaster, izinto zokuhombisa ne-crockery yeentsuku eziyi-6.
4.90 · Izimvo eziyi-148
Kufuphi neendawo eziphawulekayo ezifana nesikhululo i-Irrum Manzil Metro, ii-Bhavan, isibhedlele i-NiMS (ukuhamba imizuzu eyi-5) kunye ne-Asian Institute of Gastroenterology (ukuhamba imizuzu eyi-2). Ii-cinemas, i-Decathelon (uhamba imizuzu eyi-3). Iindawo ezininzi zokutya ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Zahed
Ummeli uza kufumaneka ukuze afumane aze anxibelelane